Kunonaya, kuri kunaya kitsi uye imbwa, mhepo yemhepo yaridza amburera yako mukati, uye zvino wanyudzwa. Kunyangwe iri nguva yechando inonaya mvura kana inodziya yezhizha mvura, iwe unozoda amburera iyo iwe yaunogona kuvimba nayo kuti uchengetedze muviri wako.
Kana iwe wakafanana nevamwe vedu, iwe haugaro rangarira kuyeuka kutarisa mamiriro ekunze. Saka kana uchitsvaga amburera nyowani, tsvaga imwe diki, isina hurema kuti iwe ugone kuitakura pamwe newe nguva dzese, zvisinei nekuti mamiriro ekunze akaita sei. Maamburera akanakisa akasimbisa mbabvu uye airy canopies iyo inowira mumhepo yemhepo uye kudzivirira kuva DE facto chikepe chakagadzirira kukutakura kuenda newe. Iye zvino, makambani mazhinji anopawo teflon paints kuitira kuti maficha avo aome nekukurumidza uye iwe unogona kudzivirira mapepa akanyorovera pasi peamburera. Maitiro matsva emamburera anosanganisirawo yakasarudzika, mukati-kunze sarudzo: neiyi michina, iyo "kunze" yakanyorova chikamu cheamburera inogona kupetwa kumusoro uye kutendeuka mukati, ichichengeta mvura ichipinda mukati, kure nemotokari yako, pasi uye zvipfeko. Idzi sarudzo dzakapomberwa dzinogona zvakare kumira pachezvadzo uye hazvidi mataira kana amburera.
Isu takaunganidza amburera akanakisa ekuchengetedza kuti usanyorove mudutu rinotevera. Tarisa uone sarudzo dziri pasi apa kuti uwane yako yaunofarira maitiro - kune kunyange husiku neakaratidzira akachengeteka mitsetse! - uye wedzera kune yako yekutenga ngoro. Inotevera nguva yekufanotaura kwemamiriro ekunze ichiti kushambidza, iwe unenge uine chako chekuwedzera chagadzirira.
Basa redu kuSheKnows ndere kupa simba uye kukurudzira vakadzi, uye isu tinongoita zvigadzirwa zvatinofunga kuti muchada zvakanyanya sezvatinoita. Ndapota cherekedza kuti kana iwe uchitenga chimwe chinhu nekudzvanya pane chinongedzo mune iyi nyaya, tinogona kugamuchira diki Commission pakutengesa, uye mutengesi anogona kugamuchira imwe yakaongororwa accounting data.